आर्मीको फराकिलो जित, पुलिस भने स्तब्ध – Khel Dainik
आर्मीको फराकिलो जित, पुलिस भने स्तब्ध
माघ २१, २०७७ | (PostaComment)
काठमाडौं (खेलदैनिक) । राष्ट्रिय महिला लिगमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले बुधबार चौदण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुरमाथि १२–० को फराकिलो जित हात पारेको छ ।
सातदोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा सम्पन्न खेलमा आर्मीका लागि शर्मिला थापाले ह्याट्रिक सहित पाँच गोल गरिन् । त्यस्तै सपना लामाको नाममा दुई गोल रह्यो । आर्मीलाई फराकिलो जित दिलाउने क्रममा हेमा चौधरी, अन्जली वाईबा, बिमला चौधरी, बिमला बिक र रश्मी घिसिङले पनि एक–एक गोलको योगदान दिए ।
खेलमा आर्मीकी ह्याट्रिककर्ता शर्मिला थापा नै प्लेयर अफ द म्याच घोषित भईन् । यो जितसँगै ६ खेलबाट १३ अंक जोडेको आर्मी दोस्रो स्थानमा छ । र लिगलिडर एपिएफ भन्दा ६ अंकले पछाडी छ । उता पराजित चौदण्डीगढी भने अंकविहीन रुपमा पुछारमा छ ।
बिराटनगरसँग पुलिस स्तब्ध
बुधबार नै भएको अर्को खेलमा बिराटनगर नगरपालिका, मोरङले अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबमाथि १–० को सनसनीपुर्ण जित निकालेको छ । एन्फा कम्प्लेक्स मै सम्पन्न खेलमा बिराटनगरका लागि खेलको शुरुवाततिर नवौं मिनटमा पार्वती घलेले गरेको एक मात्र गोल बिराटनगरलाई ३ अंक दिलाउन प्रर्याप्त बन्यो ।
खेलमा बिराटनगरका लागि निर्णायक गोल गरेकी पार्वती घले नै प्लेयर अफ द म्याच घोषित भईन् । यो जितपछि ६ खेलबाट १० अंक जोडेको बिराटनगर लिगतालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ र दोस्रो स्थानको टोली आर्मी भन्दा ३ अंकले मात्र पछाडी छ । उता पराजित पुलिस भने ८ अंकका साथ चौथो स्थानमा छ ।
← फराकिलो जितका साथ आयोजक फाइनलमा रोमाञ्चक जितका साथ वार्ड ६ सेमिफाइनलमा →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने माघ २१, २०७७
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? माघ २१, २०७७
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली माघ २१, २०७७
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा माघ २१, २०७७
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित माघ २१, २०७७
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा माघ २१, २०७७